To be the leading developmental, networking front and a default information hub for sustainable, responsible aquaculture and fisheries systems supporting livelihoods in Zimbabwe
To successfully mobilize resources for the sustainable development of aquaculture and fisheries in Zimbabwe through Public, Private and Community Partnerships as a strategy to counter chronic poverty and improve people's livelihoods.
Aquaculture Zimbabwe Trust, a wholly Zimbabwean initiative, was established in early 2008 to support aquaculture projects that encourage the use of creative solutions to poverty through freshwater aquaculture and fisheries in all the local communities and enabling them to effectively participate, with credibility, in the mainstream agro-economy. Aquaculture Zimbabwe Trust is committed to facilitating the sustainable development of ecologically sound freshwater aquaculture and fisheries in Zimbabwe. The project makes history as the first of its kind in Zimbabwe. This commitment is consistent with the Government's vision for the future in which all the economic sectors of this country lie in the hands of the indigenous people, total empowerment that promotes sustainable development and recognizes the economic opportunities that industries, like aquaculture, can bring to the Zimbabweans.
1. Martin Dingwa
Mobile: +263 77 2881398
2. Garikaimose Tongowona
Mobile: +263 77 3802355
3. Sophia Mungwashu
4. Wilson Mhlanga
Mobile: +263 77 2236104